हामी विभिन्न ठाउँ गएको कुरा गुगलले कसरी थाहा पाउँछ ? | Mithilanchal Today
Home सूचना प्रविधि हामी विभिन्न ठाउँ गएको कुरा गुगलले कसरी थाहा पाउँछ ?
३१ बैशाख २०७९, शनिबार १२:१४
काठमाडौं । तपाईंलाई याद छ, आजभन्दा एक वर्षअघि तपाईं कहाँ जानुभएको थियो ? यदि कसैले कुन मितिमा कहाँ गइएको थियो भनेर प्रश्न गर्‍यो भने तपाईंलाई आफू गएको ठाउँ ठ्याक्कै याद गर्न केही समय लाग्छ । तर, गुगल म्याप्सले तपाईंले फोन कहिलेबाट प्रयोग गर्न थाल्नुभएको थियो, त्यही दिनदेखि तपाईं कहाँ कहाँ जानुभयो भन्ने कुराको डेटा राखेको हुन्छ ।
हामीमध्ये धेरैले गुगलले निर्माण गरेको एन्ड्रोइड अपरेटिङ सिस्टमद्वारा सञ्चालित फोन प्रयोग गर्छौँ । यस अर्थमा फोनको सम्पूर्ण सिस्टम गुगलको हातमा छ । जति हामीलाई हाम्राबारे थाहा नभएका धेरै कुरा गुगललाई थाहा छ । आज हामी तपाईं कुन दिन कहाँ कहाँ जानुभएको थियो भनेर जानकारी दिने गुगल म्यापमा भएको टाइमलाइन फिचरका बारेमा चर्चा गर्छौँ ।
यसो त प्रविधिका पनि फाइदा पनि छन्, अनि बेफाइदा पनि । फाइदा र बेफाइदा त्यसलाई कसरी प्रयोग गरिएको छ भन्ने कुरामा निर्भर रहन्छ । त्यस्तै गुगल म्याप्सको टाइमलाइन फिचरका पनि सकारात्मक र नकारात्मक पक्षहरू छन् ।
गुगल म्याप्सको टाइमलाइन फिचरका माध्यमबाट आफू कहिले कुन ठाउँ, कुन बाटो केमा गएको थियो सबै कुराको जानकारी पाउन सकिन्छ । तपाईंका हरेक गतिविधिमा गुगलले विभिन्न माध्यमबाट नजर लगाइरहेको हुन्छ । यसबाट के बुझ्न सकिन्छ भने हामीलाई हाम्रा बारेमा जति थाहा छ त्यो भन्दा कैयौँ कुरा गुगललाई थाहा छ ।
गुगल टाइमलाइनले विशेषगरी तपाईं कुन मितिमा कहाँ कहाँ जानुभयो भन्ने कुराको जानकारी राख्छ । यात्रा गर्दा तपाईं कुन कुन ठाउँमा बास बस्नुभयो वा कुन ठाउँमा खाना खाना खानुभयो त्यो सबै टाइमलाइनको माध्यमबाट जानकारी पाउन सकिन्छ । तपाईंले टाइमलाईन हेर्न सबैभन्दा पहिलेगुगल म्याप्समा जानुहोस् ।
त्यसपछि माथि बाताँतर्फ देखिएको आफ्नो प्रोफाइलमा ट्याप गर्नुहोस् । त्यसपछि त्यहाँ योर टाइमलाइन (Your Timeline) भन्ने अप्सन देखिन्छ । त्यसमा गएर तपाईंले हरेक दिनका कहाँ यात्रा गरियो भन्ने कुराको जानकारी पाउनु हुन्छ । त्यसका लागि तपाईंले म्याप्समा कुन अकाउन्ट कहिलेबाट प्रयोग गरिरहनु भएको छ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ ।
तपाईंले जति पहिले सो गुगल अकाउन्ट प्रयोग गर्नुभएको छ त्यही दिनदेखिको जानकारी त्यहाँ पाउन सक्नुहुन्छ । योर टाइमलाइन भन्ने अप्सनमा गइसकेपछि तपाईंले त्यहाँ बीचमा टुडे (Today) लेखिएको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ ।
त्यहाँ आफूलाई आवश्यक परेको मिति छानेर यात्रा विवरण हेरन सक्नुहुन्छ । यसले कुन बाटो यात्रा गर्नुभयो भन्ने कुरा हाइलाइट गरिदिने गर्छ । त्यस्तै सोही पेजको माथि डे, ट्रिप्स, इन्साइट्स, प्लेसेस, सिटी, वर्ल्ड भन्ने अप्सन देख्नुहुन्छ ।
तिनै विविध अप्सनका माध्यमबाट विश्वभर कुन कुन देशमा यात्रा गर्नुभयो, कुन कुन सहरमा जानुभयो, कुन कुन ठाउँमा जानुभयो भन्ने कुराको जानकारी पाउन सक्नुहुन्छ ।
त्यसपछि त्यहाँ मेनेज योर गुगल अकाउन्ट (Manage Your Google Account) भन्ने अप्सनमा ट्याप गर्नुहोस् ।
पछाडि पोस्टचालकको एस्तो अ’ब’स्था चालक के भन्छन! यसकारण खसेको रहेछ ५०० मिटर तल गाडी गाउँनै सो ‘क’मा (भिडियो सहित) – Anautho
अगाडि पोस्टलहान नगरपालिकाका निर्वाचन अधिकृत बिरामी भएपछि सर्वदलीय बैठक स्थगित :: स्वास्थ्यखबर :: स्वास्थ्य खबरपत्रिका